Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hotely UK: manomboka amin'ny telovolana farany amin'ny 2019
Tahaka ireo telo nialoha azy, ny telovolana farany tamin'ny taona 2019 dia natomboka tamin'ny fidinan'ny tombom-barotra isaky ny taona isaky ny efitrano misy ao amin'ny UK, araka ny angona farany. Ny fihenan'ny 5.3% YOY ao amin'ny GOPPAR tamin'ny volana oktobra dia nihoaran'ny fisondrotana 9.4% voarakitra tamin'ny volana aprily, ary manamarika ny volana fahafito amin'ny taona hanoratana ny fihenan'ny YOY amin'ny tombom-barotra.
Ny fiakarana kely 0.1% YOY amin'ny salan'isan'ny salan'isa dia tsy ampy hanefana ny vokatry ny fihenan'ny isan'ny mponina, izay nilatsaka 2.2 isan-jato YOY. Vokatr'izany dia nilatsaka 2.3% ny RevPAR raha oharina tamin'io volana lasa io ihany - ny fihenan'ny lehibe indrindra amin'ity metric ity tamin'ny taona 2019.
Notarihin'ny fihenan'ny fidiram-bola F & B isaky ny efitrano misy (nidina 0.7% YOY), ny fidiram-bolan'ny tsy efitrano koa dia nahatratra tamin'ny volana oktobra, nandrakitra fianjerana 1.0% YOY. Miaraka amin'ny fihenam-bidy manerana ny ivontoerana fidiram-bola rehetra, ny fidiram-bola isaky ny efitrano misy dia nidina 1.9% YOY.
Ny tsy fahafahan'ny hotely anglisy mifehy ny vidiny dia nanamafy ny voka-dratsy ateraky ny filaharana an-tampony. Ny vidin'ny asa dia nitombo 2.2% YOY isaky ny efitrano, raha nitombo 0.2% kosa ny overheads. Izany dia nanampy tamin'ny fanitarana ny elanelam-bolan'ny 2019 sy 2018, miaraka amin'ny tombony YTD 2019 isaky ny efitrano azo taraina 0.8% ao ambadiky ny YTD 2018.
Ny fanovana tombom-barotra any UK dia voarakitra amin'ny 39.8% amin'ny vola miditra rehetra.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka - UK total (amin'ny GBP)
KPI Oktobra 2019 vs. Oktobra 2018
RevPAR -2.3% hatramin'ny ₤ 101.91
TRevPAR -1.9% hatramin'ny ₤ 155.71
Payroll + 2.2% ka hatramin'ny 41.97
GOPPAR -5.3% hatramin'ny ₤ 61.93
Cardiff dia maningana amin'ny vokatra ratsy ankapobeny any Angletera, ary ny fiakarana 9.0% YOY amin'ny GOPPAR tratrarina tamin'ny volana oktobra dia volana fahatelo nitomboan'ny tombom-barotra eto an-tanàna.
Ity fampisondrotana tombom-barotra ity dia naterin'ny laharana ambony matanjaka. Nahazo fitomboana noho ny fitomboan'ny YOY tao anaty trano (miakatra 1.5 isan-jato isan-jato) sy ny salan'isa (miakatra 5.0%), RevPAR dia nahatratra fiakarana 5.0% raha oharina tamin'ny volana tamin'ny taon-dasa. Ny fidiram-bola F & B isaky ny efitrano misy dia nampiseho fironana tsara ihany koa, fiakarana 2.0% YOY. Izany dia niteraka fitomboana 3.1% YOY amin'ny vola miditra isaky ny efitrano misy.
Na dia mihamitombo aza ny isan'ny olona mipetraka ao aminy, ny hotely tao Cardiff dia nahavita nifehy ny vidin'ny asa, izay tsy nisy fiovana naoty raha oharina tamin'ny volana oktobra tamin'ny taona 2018 isaky ny efitrano malalaka. Ny vidin'ny overhead dia nitombo kely isan-taona, 0.4%. Na eo aza ireo valiny mahasoa ireo, ny YTD 2019 GOPPAR ao Cardiff dia mbola 0.5% ambanin'ny valin'ny YTD 2018.
Ny fanovana tombony amin'ny Cardiff dia voarakitra ao amin'ny 31.1% amin'ny vola miditra rehetra.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka - Cardiff (amin'ny GBP)
RevPAR + 5.0% ka hatramin'ny 68.95
TRevPAR + 3.1% ka hatramin'ny 103.65
Payroll 0.0% hatramin'ny ₤ 30.41
GOPPAR + 9.0% ka hatramin'ny 32.20
Miaraka amin'ny fihenan'ny 6.3% YOY ao amin'ny GOPPAR, Oktobra dia nanapaka ny tombom-barotra nandritra ny fito volana isaky ny fitomboan'ny efitrano tao Edinburgh. Na izany aza, ny valiny tsara azo tamin'ny volana teo aloha dia mametraka ny tanàna YTD 2019 GOPPAR 4.2% ambonin'io fe-potoana io tamin'ny taon-dasa.
RevPAR dia nihena 2.2% raha oharina tamin'ny Oktobra 2018, natsangan'ny fihenan'ny isan'ny isan-jato 0.2 YOY ary ny fihenan'ny 1.9% YOY ny salan'isa antonony. Mifanohitra amin'izany, ny fidiram-bola F & B isaky ny efitrano misy dia nitombo 8.0% nifototra tamin'ny YOY, nahatonga ny fidiram-bola tanteraka isaky ny efitrano misy 0.4% YOY.
Ity fihenam-bidy amin'ny fidiram-bola tanteraka ity dia tsy ampy fanoherana ny fitomboan'ny fandaniana. Ny fiakaran'ny vidin'ny asa 4.3% YOY isaky ny efitrano misy ary ny fiakaran'ny vidin'ny 3.2% YOY dia niafara tamin'ny famotehana ny tombom-barotra ho an'ny hotely ao an-tanàna.
Ny fanovana tombom-barotra any Edinburgh dia voarakitra 36.5% amin'ny vola miditra rehetra.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka - Edinburgh (amin'ny GBP)
RevPAR -2.2% hatramin'ny ₤ 106.35
TRevPAR + 0.4% ka hatramin'ny 151.88
Payroll + 4.3% ka hatramin'ny 42.01
GOPPAR -6.3% hatramin'ny ₤ 55.50
Ny minisiteran'ny fizahantany sy ny seranam-piaramanidina Bahamas dia mampiantrano haino aman-jery ambaratonga avo indrindra sy ireo olona manana aotom-po taorian'ny poste de Hurricane Dorian
Ny mpitsangatsangana dia maniry ny famandrihana fialan-tsasatra mivantana amin'ireo mpamatsy ao anatin'ny tsy fahazoana antoka
Ny AirAsia dia miorina amin'ny 90% ny andian-tafika ao anatin'ny fiverenan'ny valanaretina coronavirus
Topi-maso kely any anaty vilany fandrendrika Seychelles